Daawo:Mu'asasada Randa Ee Mareykanka Oo Sheegtay in Al Shabaab Ay Kaalinta 1-aad Uga Jirto Jihaadiyiinta Caalamka.
Monday June 09, 2014 - 03:49:47 in Keydka Sawirada by Super Admin
Mu'asasada maraykanka uqaabilsan dejinta shaxda iyo itiraatiijiyadda ee Randa ayaa soo saartay tirakoob ku aadan kororka weerarada ay jamaacaadka jihaadiga ah ku fuliyaan caalamka.
Mu'asasada maraykanka uqaabilsan dejinta shaxda iyo itiraatiijiyadda ee Randa ayaa soo saartay tirakoob ku aadan kororka weerarada ay jamaacaadka jihaadiga ah ku fuliyaan caalamka. Mu’asasada maraykanka uqaabilsan dejinta shaxda iyo itiraatiijiyadda ee Randa ayaa soo saartay tirakoob ku aadan kororka weerarada ay jamaacaadka jihaadiga ah ku fuliyaan caalamka.
Tirakoobka howlgalada Randa ay sameysay waxaa kaalimaha hore uga jira xarakada shabaabul Mujaahidiin iyo dowladda islaamiga ee Ciraaq.
Xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgaladii ugu xooganaa fulisay sanadadii 2008,2009,2010,2011 waxayna mu’asasadu sheegtay in weerarada ay qaadday xarakada shabaabul mujaahidiin ay isugu jireen kuwa maxaalli ah iyo kuwa caalami ah oo wadamo soomaaliya ka baxsan laga fuliyay.